गढीमाई मेलामा पशु बली सुरु भए पछि भक्त्तजनहरुकाे घुइँचाे (फाेटाेफिचर सहित)
by कालिका टाईम्स १७ मंसिर २०७६ १८:५७3December 2019 0326
गढीमाई मेला हेर्न आएकाे दर्शनार्थीहरुकाे घुइँचाे । तस्बिर : प्रणय साह
वीरगंज । बाराको गढीमाई मेलामा मंगलबारबाट पशुबली दिन सुरु गरिएको छ । सोमबार अबेर रातिबाट सुरु गरिएको मुख्य पूजा सम्पन्न भएपछि मंगलबार बिहान पञ्चबली दिइएको हो । त्यसपछि मेलामा दर्शनार्थीले पशुबली दिन सुरु गरेका हुन् ।
पञ्चबलीमा बोका, पाठो, परेवा, मुसा र पाडा बली पर्छ । मन्दिरका मूल पुजारी थारु समुदायका छन् । ११ औं पुस्ताका रुपमा शिव चौधरी मूल पुजारीको रुपमा छन् । मूल पुजारीको घरमा पुजा सकिएपछि सोमबार रातिबाट ब्रम्हस्थानमा पूजा सुरु गरिएको थियो । त्यहाँ पूजा सकिएपछि माईको मन्दिर अगाडी रहेको पुरानो त्रिशुल हटाएर नयाँ फेरिएको थियो ।
त्यसपछि फर्केर आई ब्रम्हस्थानमै मंगलबार बिहान पञ्चबली दिइएको थियो । गढीमाईलाई हाँस, कुखुरा, सुँगुर लगायत अन्य विभिन्न समेत पशुबली दिइन्छ । पशुबली अघि नरबली दिने चलन छ । चौधरी समुदायका धामीले जिब्रो, आँखा मुनि, छाती, पाखुरा र तिघ्राबाट पाँच थोपा रगत झिकेर चढाउँछन् ।
गढीमाई मेलामा मंगलबार बिहान पंचवलीकाे पुजा हेर्दै दर्शनार्थीहरु । तस्बिर : प्रणय साह
मंसिर १ गतेदेखि सुरु भएको मेलामा मंगलबार र बुधबार दुई दिन पशुबली दिने कार्यक्रम राखिएकाे छ । मेलामा मंगलबार राँगा र बुधवार बोका, हाँस र कुखुराको पशुबली दिने भनिएपनि दर्शनार्थीहरुले आ–आफ्नो ढंगले बली दिन सुरु गरिसकेका छन् । पसाहा खोलादेखि गढीमाई मन्दिरसम्म नदी किनार तथा खेतमा दर्शनार्थीहरुले पशुबली दिन थालिसकेका छन् ।
गढीमाई मेलामा मंगलबार विहान रंगकाे बलि दिए पछि । तस्बिर : प्रणय साह
मेलामा लाखौंको संख्यामा दर्शनार्थीको भिड देखिएको छ । मंगलबार र बुधबार मुख्य पूजाको दिन भएकाले भिड अझै बढ्ने मुल पुजा समितिले जनाएको छ । बरियारपुरदेखि कलैयासम्म गढीमाई जाने आउने भक्तजनको घुँईचो छ । गढीमाई मेला नेपालका विभिन्न स्थानबाट मात्रै नभएर भारतबाट समेत उल्लेख्य संख्यामा भक्तजन आउने गरेका छन् ।
सीमावर्ती सहर रक्सौल, आदापुर, घोडासहन लगायत विहार राज्यका विभिन्न स्थानबाट भक्तजन मेलामा आएका छन् सोमबारसम्म २० लाख भन्दा बढी भक्तजनले मेला भरिसकेको र मंगलबार र बुधबार गणना गर्नै नसकिने गरि भक्तजन आएको मेला व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ ।
गढीमाई मेला पशु बली दिनरे मान्छे तेलवारकाे साथमा । तस्बिर : प्रणय साह
पैदलै मन्दिर सवारी सवारीसाधन मेला स्थलसम्म पुग्न नसक्ने भएपछि दर्शनार्थीहरु पैदल नै मेला भर्न पुगेका छन् । सोमबार बेलुकीदेखि कलैयाबाटै सवारीको जाम लागेपछि सर्वसाधरण हिँडेरै मन्दिर स्थल पुगेका थिए । सर्वसाधरणले लिएर गएका मोटरसाइकल, जिप, कार, बस, ट्रक, मिनी बस, तथा ट्रयाक्टर मेला स्थल भन्दा २/३ किलोमिटर वरै खेत र सडक किनारमा रोकेर राखिएका छन् ।
सुरुमा शःशुल्क पार्किङको प्रबन्ध गर्ने तयारी गरिएपनि त्यसलाई हटाइएको छ । बरियारपुरको खुल्ला चउरमा राखिएको त्रिशूलबाट मानिसका शूल रूपी तीन ताप आध्यात्मिक, आदिर्देविक र आदिभौक्तिक नाश हुन्छन् भन्ने जनविश्वास छ । त्रिशूल स्थापना भएको दक्षिणतिर हाल देवीको मूर्तिसहित मन्दिर छ ।
पशु बली दिए पछि लग्दै भक्त्तजन । तस्बिर : प्रणय साह
SQL requests:145. Generation time:1.469 sec. Memory consumption:13.74 mb